Qalalaasaha doorashada Kenya oo laga digay - BBC News Somali
Qalalaasaha doorashada Kenya oo laga digay
Image caption Mucaaradka wuxuu ku dooday in dalabkoodii ahaa in la qabto doorasho xor ah aan dhag jalaq loo siinin.
Taageerayaasha xisbiga mucaaradka Kenya ayaa lagu wadaa inay maanta dib u billaabaan muddaaharaadyadii ay ku diidanaayeen doorashada. Beesha caalamka ayaa ka digtay in xiisadaha taagan ay horseedi karaan rabshado.
Diblomaasiyiinta reer galbeedka ee dalka Kenya ayaa ka digay xiisada sii kordhaysa ee taagan ka hor doorashada Khamiista ka dhaceysa dalkaasi.
Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa isaga baxay tartanka. isagoo dhaliilay qaabka uu guddigu u abbaaray qabanqaabada doorashada ku celiska ah.
'Rabshadaha taagan iyo weerarada lagu hayo gudiga doorashooyinka ayaa xaalka sii xumaynaya kana dhigaya mid adag in la qabto doorasho xaq iyo xalaal ah' ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen diblomaasiyiinta.
Dacwad oogayaasha maxkamada Kenya ayaa sheegay in dacwad lagu soo oogay gabadh la dhalatay hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo lagu eedaynayo in rabshado abuurtay
Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay inay ka horyimaadaan doorashada la qorshaynayo maalinta Khamiista ah lana dhigo banaanbaxyo.
Raila Odinga waxuu ku baaqaya ain isabadal la sameeyo doorashada ka hor.
Ilaa dad gaaraya 70 qof ayaa ku dhintay tan iyo intii ay dhacday doorashadii la qabtay 8-da Augast ee lagu murmay.
Balse doorashadaasi dhacday waxaa tuurtay maxkamada saree e dalka oo ku tilmaamtay mid si khalad ah u dhacday
Image caption Ruth Odinga waxaa lagu eedeeyay inay hanti burburisay
Deegaanadaasi waxaa ka dhacay rabshado isbuucyadii la soo dhaafay
Image caption Kenyatta ayaa ku jira olole doorasho inkastoo musharrixii la tartamayay uu ka haray doorashada